Etu ị ga-esi nweta 100K ọnwa kwa ụbọchị na Pinterest na otu ọnwa - LucidPix
Pinterest bụ oghere dị n'ịntanetị na ebumnuche nke ịkekọrịta ọdịnaya, isoro ndị ọrụ okike ndị ọzọ na-emekọrịta ihe, ọ na-emekwa ka ọ bụrụ ihe na-enye agbamume. Anyị sonyeere Pinterest na njedebe nke Eprel ka ọ bụrụ ụzọ iji gbasaa njirimara onye ọrụ anyị ma mepụta mmata ndị ọzọ, yana inweta mmụọ nsọ maka foto 3D (ị nwere ike lelee akaụntụ anyị. Ebe a). Mgbe otu ọnwa gachara n’elu ikpo okwu, anyị toro site na puku mmadụ asaa na-elele kwa ọnwa ruo ihe karịrị 7,000 n’enweghi nkwalite akwụ ụgwọ. Na post blog a, anyị ga na-enye gị ndụmọdụ maka otu ị ga - esi nweta 100,000k ndị na - ekiri kwa ọnwa na Pinterest n'otu ọnwa.
Mepụta ọdịnaya mbụ na Pinterest
Otu n'ime ndụmọdụ kasịnụ iji zụlite ndị na-ege ntị Pinterest na anụ ahụ bụ ịmepụta ọdịnaya mbụ. Ebe ọ bụ na ikpo okwu na-enye ndị ọrụ ohere ịkekọrịta atụdo ndị ọzọ, ọdịnaya nke emepụtara nwere ike bụrụ oge ụfọdụ. Usoro ihe ntinye Pinterest na ntanetị gị na ntanetị ị chekwara ya mere ọ bụ ihe a na - ahụkarị ka ị debe ụdị posts gị na ntanetị. Site na imepụta ọdịnaya mbụ, ị ga-enye ndị ọrụ Pinterest ihe dị iche na nke ị hụbeghị. Nke a bụ nkenke isi otu anyị siri zụlite peeji LucidPix ihe karịrị 100,000 ndị na-elele kwa ọnwa, ebe foto 3D ugbu a bụ ihe pụrụ iche na akaụntụ anyị. Legide ihe atụ dị ka ihe atụ.
Pịa ebe a iji lelee Pin a!
Hazie Pinterest gi
Site n'usoro ịhazi akaụntụ Pinterest gị, ị nwere ike ịme ka ọ dịrị ndị ọrụ mfe ịgagharị. Dịka ọmụmaatụ, mepụta bọọdụ dị iche iche maka paịlị gị ma kpọọ ya aha n'ụzọ doro anya ka ndị ọrụ wee mata n'ime sekọnd ole na ole ihe isiokwu nke ọ bụla bụ. N'akụkụ a, ịhazi Pinterest gị nwere ike ime ka ilele ya anya na-atọ ndị mmadụ ụtọ. Nke a dị mkpa dịka ọ na - egosi ụdị akaụntụ Pinterest ị nwere ma na - enyere aka n'iji ọdịnaya ghara ijupụta ndị na - ekiri ya.
Mee ka atụdo gị kwụpụta iji nyere aka rute 100k
Ihe mbu ndi nlere na ahu tupu ha abanye na akaụntụ Pinterest gi bu mkpuchi. Ọ dị mkpa ịnwe nguzo ndị a iji rafuo ndị ọzọ isoro ha site na ịpị pịkị maka mmechi ma ọ bụ maka pịa. Maka ederede blọọgụ anyị, anyị mepụtara ihe osise pụrụ iche site na ngwa dị iche iche dịka Mechie na Canva. Ndị a nwere ndebiri nke ndị ọrụ nwere ike hazie ma nwalee ụdị dị iche iche, zuru oke maka ịme ihe pụrụ iche na ika. Nke a bụ ihe ọzọ dị mkpa ịtụle mgbe ị na-anwa ime ka ndị na-ekiri ya kwa ọnwa ruo 100k.
Soro Ndị Ọrụ Pinterest Ndị Ọzọ Na-eme Ihe
Pinterest na-enye ndị ọrụ ohere isoro ndị ọzọ na-eme ọtụtụ ụzọ. Ndị ọrụ na-etinye aka na akaụntụ ndị ọzọ naanị site na ịpị pịkị ha ma ọ bụ chekwaa ya na bọọdụ ha nke na-enyere aka iwulite akaụntụ. Na mgbakwunye, Pinterest na-enye bọọdụ imekọ ihe ọnụ na ọtụtụ ndị ọrụ nke na-eme ka ndị mmadụ n'otu n'otu rụọ ọrụ na ịmepụta bọọdụ ahapụtara - nke a bụ nnukwu ụzọ iji wepụta akaụntụ Pinterest gị ebe ahụ!
Ngwa ese foto 3D mepụtara njikọ n’oge iche →← Etu ị ga-esi wepụta koodu nkwalite LucidPix gị maka iPhone na gam akporo